Uhlu lwezinombolo zocingo lwe-Oman | Ukuthengisa Kuholela | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwezinombolo zocingo lwe-Oman
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zocingo lwe-Oman
Izinombolo zocingo ze-Oman
Uhlu lwezinombolo zocingo lwe-Oman luzokusiza ekufinyeleleni izilaleli eziqondiwe ezifanele esikhathini esifushane kakhulu futhi uhlu lwe database lukunikeza inzuzo enkulu ekutshalweni kwezimali futhi lubeke nengozi encane yokutshala imali kuyo. Ungasebenzisa le datha yabathengi bakwa-Oman njengethuluzi lokwakha amathuba, ukumaketha imikhiqizo nezinsizakalo zakho, nezinye izinjongo ze-B2C.
Thenga Oman Consumer People Ucingo Ucingo
Uhlu lwefoni labathengi le-Oman
I-Database yamuva Yokuposa noma i-Latestdatabse.com uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi bakwa-Oman luhlinzeka ngamakholi wakho wefoni ngemininingwane abayidingayo yokufunda ngamathemba abo, izidingo nezimo zabo ngokubhekisisa ekuthengeni inombolo ihola.
Ukuthenga uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseBelarus kusuka Database Lokumema Kamuva kunikeza amafayili angama-95% anembile futhi aqinisekisiwe aqoqwe kusuka kumapulatifomu ahlukahlukene athembekile aqinisekisa yonke imininingwane yomthengi. Ngakho-ke, ngaloluhla lwezinombolo zocingo lwabathengi oluqondiwe yilokho okudingayo ukudala ukuthengisa okuphezulu kakhulu okuhambisana namathemba akho.
Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi lwe-Oman luhlanganisa amarekhodi angama-5,000 avuselelwe zohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi olufika ku- $ 250, ongayithenga ngokukhokha ngesikhathi esithile kanye nesoftware etholakalayo engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV futhi iqale ukuhambisa kalula kudeskithophu yakho .
Database Yeposi Lamakheli lakamuva noma i-Latestdatabse.com enikeza iqiniso lokuthi ibhizinisi lakho lidinga imininingwane ebuyekeziwe kepha eqondile yohlu lwezinombolo zocingo lwabathengi kwiklayenti ngalinye elingaba khona. Lokhu kudalwe futhi kucwaningwe yimakethe yethu uqobo futhi kwenza inkampani yakho ifinyeleleke kubantu noma izinkampani. Ngakho-ke, lapho uthenga okuningana ngentengo engabizi, okukhona inzuzo enkulu yebhizinisi lakho.
Umbuzo wezinombolo ze-Oman nempendulo